Inona no atao hoe micro-fiovana ary ahoana no mampidi-doza azy? | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra
Inona no atao hoe micro-fiovana ary ahoana no mampidi-doza azy?
Ny tontolo maoderina dia feno fakam-panahy sy fakam-panahy maro, ka mety ho sarotra be ny manohitra zava-baovao. Mihatra koa amin'ny fifandraisana amin'ny lahy sy ny vavy izany.
Na dia manana vady aza ny lehilahy ary manambady am-pifaliana, dia be ny mety hisian'ny eritreritra hitranga momba ny iray hafa, izay ho tonga mpiara-miasa vaovao mandritra ny minitra vitsy monja. Miady hevitra momba izany toe-javatra izany ny mpahay siansa satria azo dinihina izany fanovana micro na famadihana tena izy.
Raha omena dera be isan'andro ny vehivavy, ary ny vehivavy ho setrin'izany dia manome lanja ireo solontenan'ny lahy sy ny vavy, avy eo azo heverina ho famadihana ve izany? Ity no horesahina etsy ambany.
Ny fahasamihafana lehibe
Ny fitaka dia antsoina hoe fifandraisana akaiky amin'ny olona tsy vady na vady ara-dalàna. Vokatr'izany dia voahitsakitsaka ny adidy sasany.
Ny foto-kevitra toy ny "micro-fiovana" dia niseho tsy ela akory izay, nefa mbola misy ady hevitra maro ny amin'ny tena zava-misy. Ity teny ity dia mihevitra ny fisian'ny fifandraisana miafina amin'ny olon-kafa, ary miafina tsara izy io. Ny fifandraisana toy izany dia mety ho tantaram-pitiavana na, akaiky (olon-tiana) fotsiny.
Indraindray izy ireo dia mitarika amin'ny fisian'ny firaiketam-po amin'ny olona iray izay tsy misy fifandraisana tena izy. Ity fifandraisana ity dia azo tanterahina amin'ny saika, izany hoe amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy na tranokala manokana. Ny zava-dehibe indrindra dia amin'ity tranga ity dia tsy misy fifandraisana ara-batana (tsy misy tompovavy na olon-tiana). Amin'ny lafiny iray, dia mety ho toa tsy misy dikany tanteraka ny fanovana micro ary tsy mila fijerena manokana. Fa eo amin'ny fiainana dia noho io antony io no mahatonga mpivady marobe misaraka.
Ireto manaraka ireto ny famantarana ny microchanges
Ny fisian'ny fifandraisana miafina tsy tapaka miaraka amin'ny olona tsy lahy na samy vavy;
Fampitana resadresaka ifanaovana amina olona tena manintona amin'ity lafiny ity;
Dinika momba ny fifandraisana misy amin'ny olon-tsy fantatra;
Fisolokiana amin'ny resaka fananana tena mpiara-miasa, ary tsy fanahy iniana mitranga izany;
Ny olona tsara tarehy dia nosoratana tamin'ny anarana noforonina.
Noho ireo famantarana ireo dia azo atao ny mametraka ny zava-misy ny fisian'ny fiovan'ny micro ao amin'ny fifandraisana.
Raha takiana ny fanekena ny fisian'ny aretina toy izany amin'ny mpiara-miasa, dia tsy hisy olana manokana amin'izany. Raha ny marina, ireo famantarana dia tena mitovy amin'ny famadihana tanteraka (ny fisehoan'ny olon-tiana).
Ohatra, tsy fahita matetika ny lehilahy na ny vehivavy manova ny fomba fanaony mahazatra, tsy amin'ny tena izy ihany, fa amin'ny tambajotra sosialy ihany koa. Miresaka momba ny fanovana ny fomba fitafiana sy ny fanoratana lahatsoratra marobe amin'ny pejy manokana izahay. Raha eo akaiky eo ny antsasany, dia maty tampoka ny efijerin'ny fitaovana finday na mikatona ireo takelaka ao amin'ny solosainao. Noho io antony io dia manomboka mipoitra ny eritreritra isan-karazany momba ny olana mety hitranga ao amin'ny fiarahana. Manoro hevitra ny psikology fa tsy hanipy avy hatrany ny fiampangana ny famadihana.
Misy ve ny fandrahonana amin'ny tena fifandraisana
Matetika, ny famantarana toy izany dia miseho amin'ny tsiroaroa efa misy, noho izany dia mila mijery tsara ny olana mety hitranga amin'ny fotoana mety ianao. Raha manafina ny fifandraisana ara-pihetseham-po ny olona iray, dia midika izany fa famitahana ny sakaizany sy ny fikatsahana fahafaham-po ara-môraly amin'ny olona ivelany. Miaraka amin'ny famitahana tsy an-kijanona, dia voamarika ny fanafenana manamora ny fanovana micro, noho izany dia manomboka miseho ny eritreritra zavatra hafa bebe kokoa, izany hoe mamindra ny fifandraisana toy izany amin'ny tontolo virtoaly ho amin'ny zava-misy.
Tsy ampirisihina hangina fotsiny ianao ary hiandry ny antsasak'adiny hampiato ny lalao toy izany. Raha tsy izany dia hitarika amin'ny fisehoan'ny tompovavikely sy ny fanimbana ny mpivady.
Fomba hiadiana amin'ny fiovana bitika
Voalohany, mila mitondra ny sakaizanao amin'ny resadresaka am-pahatsorana ianao ary mamaritra ny fetran'ny zavatra azo ekena, izany hoe manokana azy amin'izay ho ekena sy izay tsy ho ekena. Ny olona sasany dia mety hihevitra fa tsy fifankahazoan-kevitra tsotra izany fifandraisana izany, fa ny sasany kosa milaza fa famadihana tena ataon'ny olon-tiana iray. Zava-dehibe ny hahitana ny halehiben'ny fahatsapana ananan'ny mpiara-miasa amin'ilay olona itantanana ny fifandraisana virtoaly. Indraindray dia mitranga fa ny tapany iray hafa dia tsy milaza teny sy teny fiderana, noho izany dia mila mitady izany ianao amin'ny sisiny.
Iza no misogynist?
Ahoana ny fihazonana fifandraisana eny lavitra?
Fomba entina manala lehilahy manambady ny tompovaviny
Ahoana no hanaporofoana amin'ny tovovavy fa tianao izy
Famoronana asa vita amin'ny pasta ho an'ny Paka: kilasy mahay
59 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,487.